यातायात ब्यबसायी संगठित हुदा सिण्डीकेट देख्ने हाम्रो समाजको दृष्टीकोण दोषी छ । दधिराम खरेल , अध्यक्ष पश्चिम नपाल बस ब्यबसायी संघ | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता यातायात ब्यबसायी संगठित हुदा सिण्डीकेट देख्ने हाम्रो समाजको दृष्टीकोण दोषी छ । दधिराम खरेल , अध्यक्ष पश्चिम नपाल बस ब्यबसायी संघ
पछिल्लो समय दुर्घटना बढेको हो ?
होईन हामिले देख्दा त्यस्तो देखिएको भएपनि पछिल्लो समय बिगतका बर्षहरुको तुलनामा दुर्घटनामा कमी आएको हो । तर कतिपय दुर्घटनाले सवैको मन जिरींङ्क गराएको छ । एउटै दुर्घटनामा धेरैको ज्यान गएकोले दुर्घटना बढेको जस्तो देखिएको हो । तर हामीले पछिल्ला बष सञ्चालन गरेको अभियानले संघमा आबद्ध गाडीहरुको दुर्घटना अत्यन्त कम भएका छन ।
संख्यात्मक हिसावले दुर्घटनामा कमी आएको हो त्यसो भए ।
हे केहि बर्ष यता साना दुर्घटना दिनहु भै रहे भन्ने परेको छैन तर एकाध दुर्घटनाहरुले सवैको ध्यान तानेका छन स्वभाबिक पनि हो सडक दुर्घटनामा कसैको ज्यान जादा चिन्ता र चासो हुनु तर त्यो चिन्ता र चासो केही समय सम्मका लागी मात्र हुनु दुर्घटना न्युनिकरणका लागी चिन्ताको बिषय भने अवश्य हो ।
कसरी कमी आएको हो दुर्घटनामा ?
हामीले ०६६ साल देखि निरन्तर चालक तथा परिचालकलाई प्रशिक्षण दिदै आएका छौ । उनिहरुले एउटा सानो दुर्घटना गरे पनि ट्रिप शुल्क रोक्का गरेका छौ, प्रशिक्षण नलिएको चालकलाई ट्रिप शुल्क दिएका छैनौ । हाम्रो यो कामले धेरैको सडकमा ज्यान जान बाट जोगिएको छ । अर्को कुरा प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गर्ने र सवारी चलाउनेहरुका बिरुद्ध थालेको अभियानले दुर्घटना हुन र त्यस बाट हुने क्षती कमगर्न ठुलो मद्दत गरेको छ ।
दुर्घटना बढनुका कारण हरु के के हुन ?
हामीले आफैले ब्यख्या गरेर मात्र पनि हुदैन त्यसलाई यथार्थ रुपमा खोजिगर्नका लागी त्यसको गहिराईमा पुग्नु पर्छ । त्यहा चालक जोडिएको हुन्छ, त्यहा सडकको क्षमता जोडिएको हुन्छ, त्यहा सवारी साधनको अवस्था जोडिएको हुन्छ, त्यहा सडकको अवस्था र बिमाको पोलिसी जस्ता बिषयहरु जोडिएका छन । सवैले गर्ने लापर्वहीले दुर्घटना बढेका हुन । अझ भन्ने हो भने सवैले सडक दुर्घटना र यातायात ब्यबस्थापनका कार्यलाई आफ्नो अनुकुलता ब्याख्या गर्दा समस्या बल्झीरहेको छ । अझ भन्ने हो भने सडकको अध्यायन र अनुगमन बिना सवारी सञ्चालन गर्न दिनु यात्रुको चाप भन्दा बढी सवारी साधन आयात गर्नु जस्ता कारणले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएको छ जसले निर्दोष नागरीको ज्यान गएको छ । यसर्थ राज्यको यातायात ब्यबस्थापनको निती कमजोर कामचलाउ र फितलो भएकोले दुर्घटना बढेको हो । त्यसका अलवा यात्रुहरुको लार्पवाही मोटर साईकल चलाउने युवाहरुको स्वभावका कारणले केही नसोचेका घटनाहरु घटेका छन तिनमा पनि सवारी साधन र चालकलाई दोष देखाउने गरीएको छ ।
दुर्घटना न्युनिकरण गर्ने उपायहरु के के हुन ।
दुर्घटना न्युनिकरणका लागी हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर सवैले नभने सम्म दुर्घटना न्युनिकरण हुदैन दुर्घटना न्यनिकरणका लागी साझा पहल जरुरी छ । हामीले पनि राज्यले के गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने तर्फ लाग्नु हुदैन । जहा गोष्ठी र सेमीनार हुन्छ त्यहा ठुला कुरा र भाषण गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्षमा आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने कार्य अन्त्य गरीनु पर्छ ।हामी यातायात ब्यबसायीले मात्र प्रयत्न गरेर दुर्घटनामा कमी आउन सम्भव छैन । साच्चैनै दुर्घटना न्युनिकरणका लागी जिम्मेवार हुने हो भने राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त अध्यायन अनुगमन टोली बनाएर साझा अवधारणका साथ अगाडी बढनु पर्छ ।
यातायात क्षेत्रमा पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघले एकलौटी गरेको, दादा गीरी गरेको सिन्डीकेट लागु गरेको आरोप छनी ?
यो ब्यवाहारमा छ या छैन तपाईहरुलाई थाह छ । हामी यातायात ब्यबसायीको हितमा काम गर्छौ हाम्रो सानो कमजोरीले २२ सय ब्यबसायी रतिनाका परिवार को बिचल्ली होस भन्ने कल्पना पनी गर्दैर्नौ त्यसका साथै करिव ४५ सय मजदुर र तिनका परिवारका सदस्यहरुको राजी रोटि खोसिने अवस्था श्रृजना होस भन्ने चाहन्नौ । ती ब्यबसायी र मजदुरको हितमा काम गर्नु पश्चिम नेपाल बस ब्यबसायी संघको दायित्व हो । हाम्रा सबैभन्दा महत्वपुर्ण र भगवानका रुपमा रहेका यात्रुहरुको हित बिपरीत पनि हामी अगाडी बढन चाहन्नोै । तर केही गाडी माफीयाहरुको चलखेल लाई निस्तेज पार्ने क्रममा केही बिवाद भएको हो तर दादागीरी गरेको होईन । त्यस प्रति गलत बुझ्नेहरुको बुझाई दादागीरी हो भन्ने बुझ्पचाई प्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।
यसको मतलव तपाईहरुले सिण्डकेट लगाउनु भएको छैन ?
कहा छ सिण्डीकेट ? तपाईले भन्न खोज्नु भएको कस्तो सिण्डीकेट हो ? हामी ब्यबसायीहरु मिलेर आलो पालो गरेर गाडी चलाउछौं भन्नु सिण्डीकेट हो ? हामीले ब्यबसायी ब्यवसाय बाट बिस्थापित हुन नपरोस भनेर ब्यबस्थीत ढंगले सवारी साधन चलाएका हौं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस भनेर ब्यबस्थापन गरेका हौं । कारण बस सडक दुर्घटना हुदा यात्रु वा तेश्रो पक्षले कहा उपचार खोज्ने ? कहा न्याय खोज्ने ?कहा क्षतीपुर्ति खोज्ने ? जस्ता समस्या नआउन भनेर स्वयम पिडीत पक्षलाई न्याय उपचार र राहत दिन सामुहिक ब्यबस्थापन को निती अवलम्वन गरेका हौं । कुनै पनी तेश्रो पक्षले अहिले उपचार वा राहत नदिएर गाडिवाला भाग्यो भन्ने अवस्था आएको छैन । कतिपय दुर्घटनामा गाडिको मुल्य भन्दा कयौं गुना बढी खर्च उपचारमा खर्च भएको छ । यदि संस्थागत नभएको भए त्यो उपचार एउटा गाडी धनी बाट उपचार सम्भव थिएन , उपचारका लागी बिमाले दिने बिमा रकमले कतीपय दुर्घटनाका घाईतेको उपाचार होईन उद्धारमा खर्च भएको छ । कतिपय दुर्घटनाका घाईते बचाउन हेलीकप्टर चार्टर गर्नु परेको छ । ब्यक्तिले भए त्यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो होला । अरु क्षेत्रका ब्यबसायी संगठीत हुदा सिण्डीकेट नदेख्ने यातायात ब्यबसायी संगठित हुदा सिण्डीकेट देख्ने हाम्रो समाजको दृष्टीकोण दोषी छ ।
अरुलाई गाडी ल्याए चलाउन दिनु हुन्न किन ?
हामील त्यसो गरेका छैनौ बषोै देखि ब्यबसाय गरी रहेको ब्यबसायी बिस्थापीत हुनु नपरोस भन्ने उदेश्यले हामीले साझा मत बनाएर आलो पालो प्रणाली अन्र्तगत यातायात ब्यबस्थापन गर्दै आएका छौ नया गाडी ल्याउन चाहने हरुलाई पनी हाम्रो आग्रह केहो भने समस्याको समाधान साझा ढंगले गरौ तपाईले ब्यबसाय गर्दा अरुले हात धुनु नपरोस भन्ने कुरा बुझाउन मात्र खोजेका हौ । एउटै ब्यबस्थापन नितीमा रहेर सवारी सञ्चालन गर्ने कुरामा हाम्रो असहमती हुदै होईन ।तर ब्यबसायलाई अमर्यादित बनाउने कुरामा हाम्रो सहमती हुन सक्दैन ।
यात्रुलाई सुबिधा दिने तपाईहरुका योजना के छन ?
हामी पछिल्लो समय बुटवल बाट अत्याधुनीक नया मोडलका स्तरीय सवारी साधन हरु बाट सेवा दिई रहेका छौ । हामी संग आज पनी १३ बर्ष भन्दा पुराना बस हरु छैनन । राज्यले २० बर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने भनेको भए पनी राज्य बाट कुनै पनि ब्यवसायीले राहत पाएको छैन तर हामीले गाडीको मुल्यांकन गरेर राहत दिएका छौ । यस बर्ष मात्र हामीले १ सय भन्दा बढी गाडी बिस्थापीत गर्दै छौ । तर आफुले लगानी गरेको बस बिस्थापीत गर्दा पनि ब्यबसायी ब्यबसाय बाटै बिस्थापित हुनु पर्ने बाध्यता छैन । हामीेले गरेको लगानीले नया नया सवारी साधनमा यात्रुले यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन । यसका साथै सञ्चारको बिकास र त्यसको मागलाई सम्वोधन गर्दै लामो दुरीका सवारी साधनहरुमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुमा नेट ईन्टरनेटको पहुच बढाउन वाईफाई सेवा समेत दिएका छौं ।
सामाजिक क्षेत्रमा तपाईहरुको भुमिका ?
हामीले पछिल्ला केही बर्ष यता शिक्षा क्षेत्रमा सानो लगानी गरेका छौ । लुम्विनी अञ्चलका ६ बटै जिल्लामा सामुदायिक बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरीव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरु मध्ये प्रवेशीका परिक्षमा उत्कृष्ठ अंक ल्याउने ६ जना बिद्यार्थीलाई छात्रवृती रकम दिएका छौ जस बाट उनीहरुको अगाडीको अध्यायनको बाटो सहज होस । त्यसैगरी कुनै पनी दुर्घटना नगरेका चालकहरु लाई पुरस्कृत गर्ने कुरा देखि नियमीत रक्तदान र एम्वुलेन्स सञ्चालन जस्ता महत्वपुर्ण मानविय सेवामा सहभागी हुदै आएका छौ । दुर्घटना हुन नपाओस भनेर सचेतना तालिम सञ्चालन गरेका छौं । आगामी दिनमा यात्रुको सुरक्षाका लागी नया योजनाहरु सञ्चालन गर्ने छौं ।